5 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်းပွဲစား 2022 ဦး- ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖတ်ပါ။
ETF ပွဲစားများ - ၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံး ETF ပွဲစားများကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ETF ပွဲစားများ - သို့မဟုတ် ETFs (Exchange Traded Funds) သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမယူပဲပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်း၏အလုံးစုံအကျိုးကျေးဇူးမှာလက်လီကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်လက်လှမ်းမီရန်ခက်ခဲသောစျေးကွက်များနှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ အိမ်ခြံမြေများသို့မဟုတ်တရားဝင်ဆေးခြောက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားပါ။ ETFs သည်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင့်အားကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းမှတစ်ဆင့်မျိုးစုံပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောအာကာသထဲကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်စိတ်ချရသော ETF ပွဲစားကိုသင်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ ရာနှင့်ချီသောစျေးကွက်များတွင်တက်ကြွသောကြောင့်စည်းမျဉ်းများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များနှင့်ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းများကဲ့သို့သောမက်ထရစ်များကိုလည်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းအာကာသအတွင်းအကောင်းဆုံး ETF ပွဲစားများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ ETF များအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သင်မည်သို့ယနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့အပြင်ပိုင်းများနှင့်ရှင်းပြထားသည်။
မှတ်စု: သင့်တွင် ETFs တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမရှိပါက၊ ၎င်းသည် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအတွက် ရွေးချယ်ထိုက်ပေမည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ငွေကြေးစျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာတစ်စုံတစ်ရာမလိုအပ်ဘဲ ETF space တွင် အမြတ်များရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။.
အတိုချုပ်ပြောရရင် ETFs တွေကသင့်ကိုနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုကိုမသိမ်းဆည်းဘဲဘဏ္financialာရေးတူရိယာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ ETFs ၏အဓိကအယူအဆမှာ၎င်းတို့သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးနှုန်းများကိုခြေရာခံ။ ၎င်းတို့အားစျေးကွက်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ETF များသည်စျေးကွက်တည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုလိုက်နာရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
ဥပမာ S&P 500 ကိုကြည့်ကြရအောင်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၊ ဒီဟာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူသိများသောစာရင်းအများဆုံးကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကိုခြေရာခံတဲ့စတော့ဈေးကွက်ဈေးကွက်ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။ သာမာန်အားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော US စတော့စျေးကွက်များနှင့်ထိတွေ့လိုလျှင်၊ တစ် ဦး ချင်းရှယ်ယာ ၅၀၀ ကိုသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးရုံသာမကဘဲပွဲစားကော်မရှင်များတွင်ငွေညှစ်ငွေကိုပေးချေလိမ့်မည်။
အဲဒီအစား S&P 500 ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကိုခြေရာခံတဲ့ ETF ပွဲစားနဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းသာထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအမိန့်တစ်ခု၊ ပိုအရေးကြီးတာကကော်မရှင်ကြေးတစ်ခု။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့စတော့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှသင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးကိုလည်းအသစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ETFs များကို သမားရိုးကျ စတော့ဈေးကွက်များအတွက်သာ သီးသန့်ထားထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုခြေရာခံသည့်စျေးကွက်တွင်လက်ရှိတွင် ETFs ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဒီအထဲမှာ ကုန်စည် ကဲ့သို့ ရှေ, ငှေတရားဝင်ဆေးခြောက်၊ ဆီနှင့် ဂြုံပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ လေကြောင်းခရီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဲ့သို့သော သီးခြားကဏ္ဍများ။
ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ပါ။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းမှတစ်ဆင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
စျေးကွက်ရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားမှန်သမျှကို ခြေရာခံပါ။
အခြားလက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲစေမည့် စျေးကွက်များနှင့် ထိတွေ့မှုရယူပါ။
ပိုင်ဆိုင်မှုကို လွယ်ကူစွာ တိုတိုတုတ်တုတ် လုပ်နိုင်ခြင်း။
ရွေးချယ်ရန် ETF ပွဲစားရာပေါင်းများစွာ။
ETFs များ၏အသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ETF ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့်အများစုမှာ ETFs များဖြစ်သောစတော့ရှယ်ယာများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများစသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းသောရိုးရာအွန်လိုင်းပွဲစားများဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အခြားသောအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပွဲစားကိုရှာဖွေပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးသောအခါသင်သည်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ETF တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏ငွေကိုအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေဖြင့်အပ်နှံထားခြင်းမရှိပါက DIY အခြေခံပေါ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
ETF ပွဲစားများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါ့အပြင် ETF မှာဘယ်တော့မှမ ၀ င်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့မခွဲမခွာသုတေသနလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
✔️ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ETF များနှင့် CFDs
အကယ်၍ သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ETF တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကပွဲစားသည်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ Dow Jones Index ကိုခြေရာခံသည့် ETF တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဆိုပါစို့။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ETF ပွဲစားသည် Dow ကိုကိုယ်စားပြုသောကုမ္ပဏီ ၃၀ တွင်စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် ETF ပွဲစားသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုတွက်ဆမည်ဖြစ်သောကြောင့်ညွှန်းကိန်းနှင့်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Walt Disney သည် Dow Jones ၏ ၅% ကိုအလေးချိန်တွက်ချက်သည်ဆိုပါက ETF ပွဲစား၏အစုစုသည် ၅% တွင် Walt Disney ၏ရှယ်ယာများပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့် သင်တစ်ဦးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ CFD သင့်အား ETFs များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည့် ပွဲစား။ ဒီလိုလုပ်ရင် CFD ပွဲစားက လုပ်လိမ့်မယ်။ လမ်း ETF စျေးကွက်၏တကယ့်ကမ္ဘာ့စျေးနှုန်းဖြစ်သော်လည်းနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဝယ်ပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့် CFD များသည် ETF ပံ့ပိုးသူနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်နည်းတူများစွာအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်သော်လည်းအခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များသည်များစွာနိမ့်သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ETFs တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာသင်ရွေးချယ်ထားသောစျေးကွက်တွင်ရှည်လျားစွာ (သို့) တိုတောင်းသောရွေးချယ်မှုရှိလိမ့်မည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်, ရှည်လျားသောသွားဆိုလိုတာကသင်တက်တန်ဖိုးတက်သွားပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်။
တိုတောင်းမယ်ဆိုရင် ETF စျေးကကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ETF ပွဲစားများအားလုံးသည်သင့်အားစျေးကွက်ရှည်စွာသွားရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင်တိုတောင်းလိုပါက CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
သင် ETF ကိုကြာမြင့်စွာသွားလိုပါကသင်သည် '၀ ယ်ယူ' မှုအမိန့်ကိုလိုအပ်သည်
အကယ်၍ သင် ETF ကိုတိုတောင်းချင်လျှင်“ sell” order ကိုထားရှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
✔️ ETF စျေးကွက်များ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ETF တစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၌သောင်းနှင့်ချီသောစျေးကွက်များရှိသည်။ ထိုအရာများဖြင့် ETFs ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်ထူးခြားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ရှိသည် - ETF ပွဲစားများသည်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အများဆုံးအောက်တွင်ရောင်းဝယ်သော ETF စျေးကွက်စာရင်းပြုစုပါတယ်။
စတော့ဈေးကွက် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ETF များသည်သင့်အားပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည် ဥပမာအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုထိတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် S&P 500 ဒါမှမဟုတ် Dow Jones ကိုခြေရာခံတဲ့ ETF တစ်ခုမှာသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ သင်က UK စျေးကွက်များနှင့်ပူးပေါင်းလိုလျှင် FTSE 100 တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ချည်နှောင်ခြင်းကို: ETFs များသည်ငွေချေးစာချုပ်စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်၏ရှေ့တန်းမှအနိမ့်ဆုံးရောင်းချရမည့်ပမာဏမှာကိန်းဂဏန်း ၆ ခုမှ ၇ ခုသာဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်: အချို့ ETF ပွဲစားများကကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ် အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trusts တစ်စုံတစ်ရာသောအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကိုခြေရာခံရန်ရှာသော (REITs) ။ ဤသည်ကသင့်အားပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှအိမ်များကိုလုံး ၀ ၀ ယ်ရန်မလိုဘဲအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။
တရားဝင်ဆေးခြောက်: တရားဝင်ဆေးခြောက်နေရာသည်ပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြောင့်တစ် ဦး ဆေးခြောက် ETF အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုမလာမှီအချိန်သာကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ ရွေးချယ်စရာ ETFs အနည်းငယ်ရှိပြီးအများစုမှာဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးသူများနှင့်ပေးသွင်းသူများကိုခြေရာခံပေးနေသည်။
အတိုးနှုန်း: အတိုးနှုန်းစျေးနှုန်းများကိုခြေရာခံသည့် ETF တွင်သင်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ဤသည်မှာသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကုန်စည်: သင်သည်ရွှေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ဂျုံကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့လိုလျှင် ETFs ကသင့်ကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ရန်သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းအားလည်းတိုတောင်းနိုင်သည်။
အထက်ပါစာရင်းသည်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိပါ။ တကယ်တော့ ETF ပွဲစားများကသင့်ကိုခြေရာခံရန်အခြားစျေးကွက်များစွာရှိသည်။
များသောအားဖြင့်သင်သည် ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအရင်းအနှီးအမြတ်အစွန်းမှတစ်ဆင့်ငွေရှာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မကြာမီဖုံးလွှမ်းသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်အချို့သော ETF များကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့စတော့များကိုခြေရာခံလျှင်သင်၏ခွဲဝေပေးငွေများကိုသင်ရရှိရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ETF ကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာငွေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာဥပမာနှစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။
Long FTSE 100 ETF ကိုရှည်လျားစွာသွားခြင်း
FTSE 100 ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်ဟာယူကေစီးပွားရေးအပေါ်အကောင်းမြင်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင်ဟာတာရှည်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
FTSE 100 ကိုလက်ရှိစျေးနှုန်း ၃၀၀၀ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်
အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်အတူ ETF သို့ပေါင် ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တစ် ဦး '' ဝယ် '' အမိန့်ထား
လအနည်းငယ်အကြာတွင် FTSE 100 ကိုဈေးနှုန်း ၃,၆၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်
၎င်းသည် ၂၀% တိုးလာသည်။
ပေါင် ၁,၂၀၀ ကိုသင်ထုတ်ယူသည်နှင့်အမျှပေါင် ၂၀၀ ကိုအမြတ်အစွန်းများရရှိခဲ့သည်
Turkey တူရကီအစိုးရငွေချေးစာချုပ် ETF တွင်အတိုချုံးခြင်း
လာမယ့်လများအတွင်းတူရကီစီးပွားရေးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ရန်အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်ဟုသင်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်တူရကီအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များမှအထွက်နှုန်းကိုခြေရာခံသည့် ETF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စျေးကွက်နှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀ နှစ်တာတူရကီအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များသည်အမြတ်ငွေ ၇% ရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ (၁၀) နှစ်စာချုပ်များသည်တန်ဖိုးကျသွားပြီးအထွက်နှုန်းမှာ ၉% အထိမြင့်တက်သွားသည်။
သင်စျေးကွက်ကိုတိုတောင်းသောကြောင့်ယခုသင်အမြတ်မှာ ၂၈% ကျော်သာရှိသည် (အထွက်နှုန်းတိုးမှ ၇% မှ ၉% သို့)
သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုထုတ်ယူရန်သင်ဆုံးဖြတ်သောကြောင့်သင်သည် '၀ ယ်ယူ' အမိန့်ကိုချမှတ်သည်
ပေါင် ၁,၀၀၀ အစုရှယ်ယာ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်အစွန်းမှာပေါင် ၂၈၀ အမြတ်အစွန်းရခဲ့တယ်
ETFs သည် Dividends ကိုပေးဆောင်ပါသလား။
အချို့သောအခြေအနေများတွင် ETFs ကသင့်အားခွဲဝေပေးချေမှုမှသင်၏ဝေစုကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ETF သည် FTSE 100 ကိုခြေရာခံသည်ဟုဆိုပါစို့။ ထိုကုမ္ပဏီ ၈၅ ခုသည်သုံးလတစ်ကြိမ်ခွဲဝေပေးလျှင်သင်၏ရှယ်ယာကိုသင်ရရှိမည် - သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ပမာဏနှင့်ညီမျှသည်။
သို့သော် ETF ပံ့ပိုးပေးသူသည်၎င်း၏အစုရှယ်ယာအတွင်းရှိအခြေခံရှယ်ယာများကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်သိမ်းဆည်းထားပါကသင်ခွဲဝေမှုအတွက်သာအရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး FTSE 100 ETF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင် CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုနေပြီးပွဲစားသည်သက်ဆိုင်ရာ ETF ၏စျေးနှုန်းကိုသာခြေရာခံသည်ဆိုပါကထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည် အမြတ်ဝေစု ခံစားခွင့် ရပါက၊ ETF ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက သုံးလတစ်ကြိမ် ပေးချေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် နေ့စဥ်အလိုက် အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုများကို လက်ခံရရှိဖွယ်ရှိသောကြောင့်၊ ကုမ္ပဏီများသည် ရက်စွဲအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးချေမှုများ၊.
ထို့ကြောင့် ETFs မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိသောကြောင့်မည်သည့်ပံ့ပိုးသူကိုသင်အသုံးပြုလိုကြောင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီသဘောနဲ့သင့်မှာရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိတယ်။
ETF ကိုပိုင်ဆိုင်သောဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ (ဥပမာ Vanguard)
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့် ETF ပွဲစားအသစ်မ ၀ င်မီသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားမက်ထရစ်များများစွာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အောက်ပါအကြံပေးချက်များမှတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။
သံသယမရှိပါကသင်လုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်အနည်းဆုံး tier-one ထိန်းညှိသူထံမှလိုင်စင်အနည်းဆုံးရှိသောပွဲစားကိုသာအသုံးပြုသင့်သည်။
ဤသည်ဗြိတိန်၏အကြိုက်များပါဝင်သည်သငျ့သညျ FCA, ASIC (သြစတေးလျ)၊စရဖ (စင်္ကာပူ)၊ သို့မဟုတ် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်)။ ပွဲစားသည် စည်းကမ်းမလိုက်နာပါက သို့မဟုတ် ၎င်းသည် အဆင့်တစ်မဟုတ်သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (British Virgin Islands ကဲ့သို့) မှ လိုင်စင်တစ်ခုသာ ရရှိထားလျှင် ၎င်းကို ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံး ရှောင်ရှားသင့်သည်။
d️ရောင်းဝယ်နိုင်သော ETF များ
ထို့နောက်ပွဲစား ETF ဌာနကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပွဲစားသည်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော ETF ကိုထောက်ခံကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စတော့ဈေးကွက် ETF တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါက FTSE 100, NASDAQ 100, Dow ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဂျုံးစ်နှင့်ပိုပြီး။
သင်အနေဖြင့်ရေတိုလျှောက်ထားလိုသည့်ရွေးချယ်မှုကိုလိုလားခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပါက ETFs တူရိယာများကိုထောက်ပံ့သော CFD ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် ETF တစ်ခုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားနေပါက၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုစွန့်စားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုထောက်ပံ့သည်ကိုသင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ETF ပွဲစားအများစုသည်သင်၏ငွေကိုငွေသားသို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်နှင့်ဘဏ်ငွေပမာဏတို့ဖြင့်ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
အချို့သော ETF ပွဲစားများသည်လည်း e-wallet ငွေပေးချေမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ရင် အဲဒီအကြိုက်တွေ ပါဝင်လိမ့်မယ်။ PayPal က, Skrillနှင့် Neteller. ပံ့ပိုးပေးထားသည့် သီးခြားငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာများပေါ်တွင်၊ အနည်းဆုံး အပ်ငွေပမာဏကိုလည်း စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်သင်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်နေလျှင် ETF ပွဲစားသည်ငွေသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။
အချို့သော ETF ပွဲစားများကိုသူတို့လုပ်နိုင်သောနိုင်ငံများတွင်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပါကပွဲစားသည် FCA နှင့် CySEC ကဲ့သို့ဥရောပအခြေစိုက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လိုင်စင်ယူရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။
ETF ပွဲစားများသည်အမြဲတမ်းအခကြေးငွေပေးရသည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာနှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းသင်၏ ETF ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပွင့်လင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အနေဖြင့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ သင်သည် REIT ETF သို့ပေါင် ၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးပွဲစားသည်နှစ်စဉ်ကြေး ၁.၅% ကောက်ခံသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ပေါင် ၇၅ ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ တနည်းပြောရရင်သင်အနည်းဆုံး ၁.၅% အကျိုးအမြတ်ကိုရဖို့တောင်မှချိုးဖျက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ထို့ကြောင့် ETF ပွဲစားများနှင့်အလွန်တရာနိမ့်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။
အကယ်၍ သင် ETFs လောကရှိမျက်နှာသစ်နေတုန်းသင်ဟာပညာရေးအရင်းအမြစ်များကိုပုံဖော်ပေးတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုရွေးချင်တယ်။ ၎င်းတွင်ဗွီဒီယိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်များသာမကသင့်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းဝေဖန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
ပြီးနောက်၊ သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို DIY အခြေခံဖြင့်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရရှိနိုင်သောအကူအညီအားလုံးကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ETF ပွဲစားများကသင့်အားမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်မပေးနိုင်သော်လည်းကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိပ်တန်းဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပွဲစားကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
၎င်းတွင်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ်နှင့်တယ်လီဖုန်းပံ့ပိုးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည် - တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဖြစ်နိုင်သည်။
Online ETF ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ရင်းနှီးရမည်နည်း။
ထို့ကြောင့် ETF ပွဲစားကိုရွေးချယ်သောအခါအဘယ်အရာကိုသတိထားရမည်ကိုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ ယခုသင်မည်သို့စတင်နိုင်သည်ကိုသင်ပြတော့မည်။ သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခရီးကိုစတင်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁ - ETF ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုမှာသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ETF ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေပါက၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည် CFD ပွဲစား (တိုတောင်းသောအရောင်းနှင့်အသုံးချခွင့်ရှိလျှင်) သို့မဟုတ်ရိုးရာ ETF ပွဲစား (အမြတ်ငွေရရန်မျှော်လင့်ပါက) ရွေးချယ်လိုခြင်းရှိမရှိသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင့်အားပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိလျှင်ဤစာမျက်နှာတွင်ထပ်မံဖော်ပြထားသော ETF ပွဲစားငါး ဦး ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးခြယ်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အထူးသဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊
သင်ရွေးချယ်ထားသော ETF ပွဲစားနှင့်အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏လိုင်စင်အဖွဲ့နှင့်ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာမှုရှိစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား အာမခံနံပါတ် (သို့မဟုတ် အခွန် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်)။
သင်၏ ETF အကျိုးဆောင်စာရင်းဖွင့်ပြီးသည်နှင့်သင်ရန်ပုံငွေအချို့ကိုထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင့်ထံမှရရှိနိုင်သောတိကျသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ပွဲစားများနှင့်အကျိုးဆောင်များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ အများစုက သင့်အား ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့် ငွေသွင်းခွင့်ပြုသည်။ ကြိုက်တဲ့ e-wallet ကို သုံးဖို့ ရှာနေတယ်ဆိုရင် PayPal ကသင်သည် CFD ပွဲစားကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
အဆင့် ၄: သင်နှစ်သက်သော ETF ကိုရှာပါ
အထူးပြုသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုရှာရန်အလွန်ရှားပါးသည် အထူးသီးသန့် ETFs မှာဆိုတော့သင်အသုံးပြုနေတဲ့ပလက်ဖောင်းကအခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုလည်းပေးချင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် site ၏ ETF အပိုင်းသို့ ဦး တည်သွားရန်လိုအပ်သည်။
ထိုအခါသင်၌သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သော ETFs စာရင်းအပြည့်အစုံကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အချို့ပွဲစားများသည်စာချုပ်များ၊ ကုန်စည်များ၊ အိမ်ခြံမြေများသို့မဟုတ်စတော့များကဲ့သို့သောစျေးကွက်၏ရလဒ်များကိုသင့်အားစစ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်တွင်တိကျသော ETF တစ်ခုရှိလျှင်၎င်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
အဆင့် ၅ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ
သင်ပြီးတာနဲ့ တည်ရှိသည် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော ETF ကိုသင်ရှည်လျားစွာ (အမှာစာဝယ်ခြင်း) သို့မဟုတ်တိုတောင်းခြင်း (ရောင်းရန်အမှာစာ) ကိုလိုချင်သည်လားဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မမေ့ပါနှင့်၊ သင် CFD ပွဲစားကိုသာအသုံးပြုပါကတိုတောင်းနိုင်သည်။
ထို့နောက်သင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအကွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်လာမည့်ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုယူရန်ပျော်ရွှင်ပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရွေးချယ်ပါ။
CFD ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှ ETF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကဤနေရာတွင်သင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ သင်လျှောက်နိုင်သည့်ငွေပမာဏကိုပွဲစား၊ သင်ရောင်း ၀ ယ်သည့်ပစ္စည်းနှင့်သင်၏တည်နေရာတို့ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်သင်၏ဝယ် / ရောင်းရန်မှာထားပါ။
အဆင့် ၆ - သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ချေးခြင်း
ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်သင်ဆန္ဒရှိသရွေ့ဆက်လက်ကစားရန်ဖြစ်သည်။ ငွေချေးစာချုပ်များကဲ့သို့အကန့်အသတ်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်ဤကိစ္စပင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ETF ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည်ခြေရာခံလိုက်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းအတိုင်းတက်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်အမြတ်အစွန်းဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်။
သင်ငွေထုတ်ယူသောအခါသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုသင်၏ ETF ပွဲစားငွေစာရင်းထဲသို့ချက်ချင်းထည့်ပေးလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းကိုရိုးရိုးလေးသာပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး5ETF ပွဲစားများ: 2022 ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပွဲစား Picks
ရာနှင့်ချီသော ETF ပွဲစားများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်၏ရေရှည်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေရန် အချိန်ကုန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်သည် ETF စျေးကွက်များ၊ အခကြေးငွေနည်းပါးသော၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုများပြားသော ETF စျေးကွက်များကို ပံ့ပိုးပေးသော ထိန်းညှိပွဲစားတစ်ဦးကို ရှာဖွေနေပါက၊ န့်နှင့် နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာ- အောက်ပါပွဲစားငါးဦးကို ရှာဖွေလေ့လာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ETFs သည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုယခုသင်၌ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသင့်သည်။ ၎င်းတွင် ETF မ်ား၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု၊ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့်စျေးကွက်များစွာနှင့်တိုတောင်းသောရောင်းအားတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောယန္တရားများပါ ၀ င်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးထုတ်ယူမှုမှာသင်၏ရေရှည်ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ETF ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးအားဖြင့်၎င်းသည်ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုအခကြေးငွေနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုရှိသောပွဲစားဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုတေသနလုပ်ရန်အချိန်မရှိလျှင် ၂၀၂၀ တွင်အကြံပေးထားသော ETF ပွဲစားငါး ဦး ကိုလည်းစာရင်းပြုစုထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ETF ပွဲစားများသည်သင့်အား ETF စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အချို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ETF များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသော်လည်းအချို့မှာ CFDs တွင်အထူးပြုကြသည်။
၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သည်အနည်းဆုံးအပ်ငွေအနည်းဆုံးပမာဏမရှိသော်လည်းအခြားအနေဖြင့်ပေါင် ၁၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒီမူတည်ပါတယ် အကယ်၍ ETF ပံ့ပိုးသူက၎င်းခြေရာခံထားသောအညွှန်းကိန်း၏ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူခဲ့လျှင်သင်၏အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင် CFD မှတစ်ဆင့် ETF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဗြိတိန်အခြေစိုက် ETF ပွဲစားများအားလုံးသည် Financial Conduct Authority (FCA) နှင့်လိုင်စင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ အခြားသောထင်ရှားသည့်လိုင်စင်ရအဖွဲ့များတွင် ASIC (Australia) နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) တို့ပါဝင်သည်။
သင် ETF တိုတောင်းနိုင်ပါသလား?
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့်မတူဘဲ ETF များသည်သင့်အားစျေးကွက်တိုတောင်းနိုင်သည်။ သို့သော် CFD မှတစ်ဆင့် ETF တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ETFs ကဘယ်လိုငွေရှာသလဲ။
အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုများသည် တန်ဖိုးတက်လာသောအခါ ETF သည် ငွေရှာသည်။ ETF ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက ရိုးရာစတော့ရှယ်ယာများ သို့မဟုတ် အညွှန်းကိန်းများကို ခြေရာခံနေပါက၊ ၎င်းသည် အမြတ်ဝေစုများမှတစ်ဆင့်လည်း ငွေရှာမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်ငွေကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ CFD ပွဲစားမှတစ်ဆင့် ETF များကိုရွေးချယ်ပါကသင်၌ e-wallet ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။